Calvary Chapel Modesto wuxuu u guuraa qolka koontaroolka, Dib u cusboonaysiin loogu wareejiyo Pix BPswitch Isdhexgalka Wax soosaarka Isku-Duubka - NAB Muujinta Wareysiyada by Broadcast Beat. Wargeyska rasmiga ah ee NAB Show, Soo-saaraha NAB Show LIVE
Home » News » Calvary Chapel Modesto wuxuu u guuraa qolka kontoroolka, Dib u habeyn loogu baahin karo Pix BPswitch Isdhexgalka Wax-soo-saarka Is-dhexgalka
Calvary Chapel Modesto wuxuu u guuraa qolka kontoroolka, Dib u habeyn loogu baahin karo Pix BPswitch Isdhexgalka Wax-soo-saarka Is-dhexgalka
Markii uu Calvary Chapel Modesto u guuray qolkeeda koontaroolka bisha Sebtembar, waxa ay qaadatay fursad ay ku rakibaan barnaamij cusub oo loogu talagalay Pix ™ BPswitch ™ MX. Kaniisaddu waxay si joogta ah u soo saartaa I MAG (sawirada kor u qaadista) ee adeegyadeeda loogu talagalay shirka iyo sidoo kale caymisyo badan oo kamarad loogu talagalay streaming live.
Iyadoo ku saleysan Modesto, Calif., Calvary Chapel waa kaniisad aan ahayn kaniisadda oo ka badan xubnaha 3,500. Iyada oo ku saleysan xarun 17-acreus ah oo leh cagaha wareega ah ee 50,000, kaniisaddu waxay bixisaa adeegyo shan habeen wiigiiba. Adeegyadiisa Axadda iyo Arbacada ayaa lagu soo bandhigaa noloshooda, adeegyadeeda Axaddana waxay si joogto ah u sawiraan daawadayaasha 1,800 aduunka oo dhan.
Muddo sanado ah, kooxda wax soo saarka tabaruca waxay ka shaqeeyeen dabaqa kore ee kaniisad qol gaar ah oo leh daaqad hal dhinac ah oo bixisay aragtida meesha quduuska ah. Dave Abbey, Agaasimaha Warfaafinta, ayaa sheegay in qaab-dhismeedku si wanaagsan u shaqeeyay muddo yar, laakiin ugu dambeyntii muraayadaha iyo cod-bixiyayaashu waxay hoos-u-qaadeen hoos-u-dhac. Markii kaniisaddu ay soo saartay dhamaan qeybaha wax soo saarka hoose ee horaantii sanadkan, waxa ay go'aansatay in ay cusbooneysiiso qalabkeeda wax soo saarka Granite ™ iyo qalabka wax soo saarka kale. Calvary Chapel ayaa heshiis la gashay Brad C. Shields iyo Associates in Modesto guud ahaan isdhexgalka.
Sida Granite, furaha cusub wuxuu u baahan yahay si uu u xakameeyo saddexdaas Sony Kamaradaha PTZ ayaa lagu rakibay derbiga dambe ee meesha quduuska ah, iyo sidoo kale soo saar laba barnaamij oo isku mar ah. Inkasta oo wax-soo-saarkayga I MAG uu yar yahay kamaradda xarunta ayaa lagu dhajiyay ereyada ka timid ProPresenter, soosaarka isdaba-joogga ah wuxuu isticmaalaa dhammaan saddexda kaamirood oo leh CG bakhaaro iyo waxyaabo kale.
Shirkadda BPswitch ee PowerAux ayaa bixisay adeegga Abbey loo baahan yahay, kaniisaduna waxay awood u yeelatay inay lacag ku badbaadiso adigoo dib u isticmaalaya guddiga kantaroolka Granite. "Waxaa ii muhiim ah inaan heysano khibrada 2 M / E iyada oo aan wax kharash aheyn 2 M / E," ayuu raaciyay. "Waxay u shaqeysaa si weyn, waannu jecel nahay."
Qolka koontaroolka cusub wuxuu u eg yahay waabari ku wareegsan derbi gaaban. "Horumarka noolaanshaha, waxaad guud ahaan dooneysaa go'doomin, laakiin annaga nala dooneyno," Abbey ayaa sharaxay. "Hadda waxaan haysanaa saddexda teknoolaji ee qolka isla, sidaas awgeed isgaadhsiintu way ka fiican tahay. Waa kala duwanaansho habeen iyo maalinba ah. "
Marka laga tago adeegyada caadiga ah, BPswitch waxay sidoo kale hagaajisay howlaha shaqada ee xusuusta, taas oo ah il ay ka soo jiidatay kooxda wax soo saarka video. Ku dhowaad adeeg kasta oo xusuusin ah waxaa ka mid ah fiidiyowga, Abbey wuxuu soo qaataa naqshad qaabab badan oo faylasha ah. Iyadoo BPswitch cusub, Calvary Chapel wuxuu isticmaalaa habka maaraynta maareynta warbaahinta ee 'BPNet ™' ee gudaha. Abbey wuxuu dirayaa xiriir ay qabanqaabiyeyaashu u gudbin karaan fiidiyowgooda. Kadib, fiidiyowga si toos ah ayaa loo beddelaa waxaana loo heli karaa ciyaar lagu ciyaaro BPswitch.
Hagaajinta qolalka kale ee kontaroolka waxaa ka mid ah laba kormeerayaal 27-inch, iyo sidoo kale qalab cusub oo Soundcraft digital audio iyo Dante digital Shabakada maqalka. Calvary Chapel ayaa sidoo kale ku daray muraayad la taaban karo oo ku yaal qolka koontaroolka, isticmaalna dhexdhexaadiyaha barnaamijka Pix Commander ™ si uu u baddalo bandhigga I MAG ee meesha quduuska ah.
Iyada oo la xirayo xiraha si adag u xiran iyo shaashadda 3D CG, Broadcast Pix wuxuu bixiyaa nidaamyada ugu waxtarka badan ee fiidiyoowga ah ee fiidiyoowga ah iyadoo la isticmaalayo tiknoolajiyada loo yaqaan patent and control automation. Laga soo bilaabo unugyada isku dhafan si aad u ballaaran, nidaamyo nidaamyo badan, Pixis walba oo dhan wuxuu leeyahay qalab ballaadhan oo u sahlaya in la hagaajiyo lana xoojiyo shaqooyinkaaga gudaha iyo dibedda IP. Waxaa intaa dheer, nidaamkeedu wuxuu ku yaala barxadda BPNet waxay bixisaa adeegyo ammaan ah oo dariiqa iyo maareynta hantida. Waxaa laga helaa 2002, Wareegtada Pix waxay leedahay macaamiisha in ka badan dalalka 100 oo ah hogaamiyaha qalabka isdhexgalka oo si buuxda u shaqeeya dawlada, fiidiyowga, dhacdooyinka, dhacdooyinka nool, iyo codsiyada raadiyaha muuqaalka ah. Wax badan ka baro www.broadcastpix.com.
Wareegga Pix, Taliyaha Pix Taliyaha, BPNet, BPswitch, iyo Granite waa calaamadaha ganacsiga ee Pix, Inc. Patent. Bedelayaasha waxaa laga sameeyaa USA.
A-America A Ticks Line Popular-Up at WFX Expo - November 12, 2018
Calvary Chapel Modesto wuxuu u guuraa qolka kontoroolka, Dib u habeyn loogu baahin karo Pix BPswitch Isdhexgalka Wax-soo-saarka Is-dhexgalka - November 8, 2018
Wargeyska Qaranka ee Nepal wuxuu doortaa FOR-A Full HD Upgrade - November 1, 2018
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Broadcast PIX dhexgalka switcher-soo-saarka Spears & Fiilooyinka Streaming Video Engineer cibaadada	2018-11-08
Previous: Technicolor PostWorks 'Ben Murray oo Hogaaminaya Guddi Qeybin ah oo ku saabsan DOC NYC
Next: Abuuritaanka Sun Pictures Sawirada: Joannah Anderson Waraysi
Archives Select Month November 2018 (213) October 2018 (496) September 2018 (495) August 2018 (398) July 2018 (876) June 2018 (869) May 2018 (871) April 2018 (831) March 2018 (780) February 2018 (685) January 2018 (605) December 2017 (396) November 2017 (712) October 2017 (835) September 2017 (608) August 2017 (583) July 2017 (710) June 2017 (543) May 2017 (621) April 2017 (695) March 2017 (704) February 2017 (340) January 2017 (364) December 2016 (608) November 2016 (344) October 2016 (556) September 2016 (622) August 2016 (1056) July 2016 (532) June 2016 (414) May 2016 (505) April 2016 (713) March 2016 (743) February 2016 (382) January 2016 (122) December 2015 (358) November 2015 (327) October 2015 (152) September 2015 (259) August 2015 (440) July 2015 (276) June 2015 (140) May 2015 (128) April 2015 (435) March 2015 (289) February 2015 (298) January 2015 (131) December 2014 (103) November 2014 (194) October 2014 (149) September 2014 (381) August 2014 (250) July 2014 (287) June 2014 (363) May 2014 (231) April 2014 (744) March 2014 (560) February 2014 (427) January 2014 (289) December 2013 (137) November 2013 (545) October 2013 (290) July 2013 (26) May 2013 (13) April 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)
Hey Buddy !, waxaan ka helay macluumaadkan adiga: "Calvary Chapel Modesto wuxuu u guuraa qolka kontoroolka, Dib u cusbooneysiinta si loogu baahiyo Pix BPswitch Isdhexgalka Wax-soo-saarka Is-dhexgalka". Waa halkan bogga internetka: https://www.broadcastbeat.com/calvary-chapel-modesto-moves-control-room-upgrades-to-broadcast-pix-bpswitch-integrated-production-switcher/. Mahadsanid.